Galmudug oo xaqiijisay gadoodka ciidanka Daraawiishta | KEYDMEDIA ONLINE
Galmudug oo xaqiijisay gadoodka ciidanka Daraawiishta
Ciidamo ka tirsan kuwa Daraawiishta Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa xalay gadooday, iyaga oo la wareegay fariiso ay Boolisku ku lahaayeen duleedka Gaalkacyo.
GAALKACYO, Soomaaliya – Ciidamo ka tirsan Daraawiishta Galmudug, ayaa sameeyay gadood, saacado kadib markii uu shaaciyay inu shaqada banneeyay Wasiirkii Amniga Axmed Macalin Fiqi, kaas oo Madaxweyne Qoorqoor, ku eedeeyay inuu doortay jidka dalaalka iyo dhiig daadinta dadka reer Galmudug.
Sida ay xaqiijinayaan wararka ka imaanaya Mudug, Ciidamada gadooday ayaa la wareegay kastamka canshuuraha lagu qaado ee Koonfurta Magaalada Gaalkacyo, halkaas oo ay hore ugu sugnaayeen Ciidamo ka tirsan Booliska Galmudug.
Gadoodka ciidamadan, ayaa loo aaneeyay is-casilaaddii Wasiir Fiqi, hayeeshee, Xukuumadda Axmed Cabdi Kariye, (Qoorqoor), ayaa beenisay in ciidamo taabacsan Fiqi, ay la wareegeen fariiso boolisku ku leeyihiin Mudug.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle, oo warbaahinta la hadlay, ayaa xaqiijiyay in ay gadoodeen Cidamo ka tirsan Dawaawiishta, wuxuuse sheegay in ay ka caroodeen arrimo la xariira mushaarka oo dib uga dhacay xilligii ay qaadan jireen.
“Waa ciidamo aan mushaarkii u soo dhicin, xallinta arrinkaasna waa lagu guda jiraa, kumana lug laha, is-casilaad iyo siyaasad toona”. Ayuu yiri Wasiir Falagle.
Ciidamada Daraawiishta Galmudug, waxaa dhisay Wasiir Fiqi, waxaana la rumeysan yahay inuu saameyn weyn ku leeyahay saraakiisha iyo askartaba.
Ma aha markii koobaad oo ciidamo ka tirsan kuwa Galmudug, gadoodaan, Keydmedia Online, ayaana fahansan in inta badan Ciidamadii taabacsanaa Galmudug, ee joogay Dhuusamareeb iyo Guriceel, ay u goosteen dhanka koox diimeedka ASWJ.